Asọmpị World Seedstars: 5 African Startups To Competi For $ 500k
Asọmpi World Seedstars: 5 African Startups ka ha sọọ $ 500k
KivuHub na-akwalite Nkà IT iji bulie Teknụzụ na azụmaahịa na gburugburu ebe obibi enyi na DR Congo
Seedstars World bụ asọmpi kachasị ukwuu n'ụwa na asọmpi
Ndị na - ahụ maka egwuregwu mpaghara maka Asọmpi World Seedstars Onlinewa 2020/21 (SSW) ekwuputala ma họpụta ndị mbido ise si Africa ka ha sonyere ndị mmeri iri abụọ na-aga n'ihu na ọkwa ọzọ.
Site na mmalite 94, naanị 20 na-aga na ngwụcha mpaghara maka ohere iji nweta ebe na Grand Finale, agba ikpeazụ nke Seedstars World Asọmpi
Na Ikpeazụ, naanị otu mmalite ga-apụta dị ka onye mmeri Global, na-enweta nnukwu onyinye nke $ 500K na ego.
Eugenia Shevchenko, onye ndu asọmpi ahụ kwuru, sị:
“Na otú ike na-atụghị anya 2020 bụ na onye ọ bụla n’ime anyị, ọ bụ ihe ịtụnanya n’ezie ịhụ anyị finalists toro n’elu mpi mgbe na-aga site na Online Seedstars Academy nakwa dị ka 1 ọnwa Investment Readiness Mmemme. Ọ ga-abụ ihe njedebe na-akpali akpali Mpaghara! ”
Seedstars, ego Switzerland nke nwere ọrụ iji metụta ndụ ndị mmadụ na ahịa ndị na-apụta, kwa afọ na-ejide Worldstars World Asọmpi maka ịchụ nta maka mbido mmalite dị mma na mpaghara Asia, Africa, CEE, MENA, na mpaghara LATAM
Site na mpaghara Africa, atumatu ise ga-esonye na Global Finale.
Nri Flamingoo (Tanzania)
Na-ewere ọrụ ugbo, Flamingoo Foods na-eji nkà na ụzụ na ndị ọrụ ha zụrụ azụ igwu osikapa anakọtara site n'aka ndị ọrụ ugbo tụkwasịrị obi n'ime Rukwa Rift Valley.
CAPTURE Ngwọta (Ivory Coast)
Ọzọ AgriTech isonye na ngwụcha bụ mbido CAPTURE Solutions.
Ha na enye B2B ICT ngwa oru ndi kompeni na ulo oru ndi choro ihazighari na idozi usoro oru ha.
FinTech mmalite na-esonye n'ahịrị nke ndị ikpeazụ. Ntughari ego na ego ịkwụ ụgwọ na-anọchi anya Ladda, usoro nkwụnye ego nkwụsị.
Sparco Inc (Zambia)
Sparco bụ ndị ọzọ fintech mmalite na finals. Ebumnuche ndị sitere na Zambia na-enye akụrụngwa ịkwụ ụgwọ Pan-Africa nke jikọtara ndị niile na-akwụ ụgwọ ahịa na kọntinent ahụ.
Holọ Rohobot (Ethiopia)
Emecha ndepụta nke ndị ngwụcha ụwa maka Africa bụ HealthTech mmalite Rohobot Home. Ha na-enye nlekọta ahụike nlekọta ụlọ maka ndị ọrịa na-adịghị ala ala na ndị agadi nwere ọnụ ahịa dị ọnụ.
Ndị mbido si Africa bụ akụkụ nke iri abụọ mpaghara ikpeazụ na-aga n'ihu na-esote, ebe mmalite ọ bụla nwere ohere itinye oghere na Grand Ikpeazụ ma merie nnukwu onyinye nke USD 500K na ntinye ego ziri ezi.
Lelee ndepụta zuru oke nke ndị ikpeazụ na mpaghara Ebe a, Tinye omume na kalịnda gị iji lelee ngwụcha mpaghara Africa.
A ga-eme ngwụcha mpaghara maka Africa na Fraịdee, Eprel 16, 2021. Ndị fọdụrụ na ndị ikpeazụ ga-alụ ọgụ site na olulu ha na ndị na-ekiri ha ga-enwe ohere ile ya niile anya na ntanetị.
Ndị na-ekiri ihe nkiri nwekwara ike ịkụnye ihe ngosi banyere Ecosystem Insights na mkparịta ụka banyere isiokwu nke Inye Ike &mụaka na Mmekọahụ nwoke na nwanyị na Africa na ndị okwu Stephanie Vaks-Stephens, Global Private Equity na Venture Capital Funds na International Finance Corporation / World Bank Group, Vuyolwethu Dubese, Innovation Onye ndụmọdụ na Betelhem Dejene, Onye guzobere & CEO ar Zafree Papers. Anne-Alice Fievet, onye njikwa oru maka Africa na Seedstars ga-emezi nnọkọ ahụ.
Elegharala isiokwu dị mkpa anya n’izu. Denye aha na izu ahia kwa izu maka mmelite.
SA Mbido Peach Payments na-enweta ego a na-akwụghị ụgwọ